Alaabta gaarka ah ee 14-300 mesh mesh naxaas ah
Waxyaabaha: silig naxaas ah (65% naxaas iyo 35% zinc)
Farsamada tolmada: toleysiga cad, tol-dhogorta tol, "bini'aadamka" tolidda iyo ubaxa bamboo
Tilmaamaha: 1 mesh - 200 mesh
Waxay leedahay iska caabin daxalka wanaagsan iyo xirashada iska caabin. Shabakad naxaas ah oo fosfooraska ah ayaa leh iska caabin aad u wanaagsan, xoog foorarsan, xirto iska caabin iyo xoog xajin. Mesh-ka naxaasta ahi waxa uu leeyahay xajin iyo fidin sax ah, shabaggu waxa loo isticmaalaa tirada xariiqyada dagaal ee inchkiiba. Mar kasta oo meshku uu yaraado, meshku wuu weynaadaa, waana sii fiicnaanaysaa waxqabadka shaandhaynta biyaha.
1. 60 ~ 70 mesh naxaas ah mesh si loo sameeyo daabacaadda wargeysyada iyo waraaqaha daabacaadda
2. 90 ~ 100 mesh naxaas ah ayaa loo isticmaalaa in lagu qoro warqad
Tilmaamaha mesh naxaasta
Hore: 14-300 mesh koronto-magneeteedka gaashaanka qurxiya shabag naxaas ah
Xiga: 304 mesh silig bir ah oo aan toos ahayn
14-300 mesh korantada gaashaanka qurxinta...
Sifada mesh gaashaanka naxaasta: Aan magnet-ka ahayn, xidhashada adkaysi u leh, ductility wanaagsan. Tilmaamaha mesh gaashaanka naxaasta ah: 6 mesh/inch——160 mesh/inji ballac: 0.6——1.5m Mesh Wire Dia. (MM) Furitaanka (mm) SWG inch mm 6mesh 22 0.711 0.028 3.522 8mesh 23 0.61 0.024 2.565 10mesh 25 0.508 0.02 2.032 12mesh 26 0.457 0.018 1.66 14mesh 27 0.417 0.016 1.397 16mesh 29 0.345 0.014 1.243 18mesh 30 0.315 0.012 1.096 20mesh 30 0.315 0.0124 0.955 22mesh 30 0.315 0.0124 0.84 24mesh 30...